Arday ayaa ku yiri Biyo Cab !! | Somaliska
Baaritaan ay samaysay idaacada Sweden ayaa lagu soo bandhigay in tiro badan oo ka mid ah dhaqaatiirka ka shaqaysa gargaarka degdega ah (Akutmottagning) aysan ahayn kuwo waxbarashadii dhamaystay. Waxbixinta ayaa baaritaan ku samaysay 32 hospitaal oo ku yaala daafaha Sweden iyadoo 36% dhaqaatiirta ay yihiin arday.
Dr Martin Wohlin oo ka tirsan jaamacada Uppsala ayaa idaacada Sweden u sheegay in maadaama aysan dhaqaatiirta inta badan waxbarashada dhamaysan ay keenayso in ay hoos u dhacdo tayada daryeelka caafimaadka ay siiyaan bukaanada. Waxa uu sheegay in ay qaasatan uu kordhiyo waqtiga ay qaadanayaan dhaqaatiirta, maadaama aysan waayo aragnimo lahayn.
Soomaalida ayaa qaasatan cabashooyin badan ku qaba dhaqaatiirta Sweden, iyadoo ay eedeymaha loo soo jeediyo ay ka midyihiin in aysan dadka daawo u qorin. Biyo cab iyo Alvedon cun ayaa qaasatan lagu yaqaanaa in dadka ay aad ugu qoraan.
Soomaalida Fagersta oo u hambalyeesay Somaliland [Video]
Kkkkkķkkk cabista biyaha waa muhiim.
BIYAHA WAA DAAWO WAA LA OGYAHAY LAKIIN MAR MAR WAXAA MUHIM AH IN QOFKA BUKAANKA AH INUU HELO BAARITAAN IYO DARYEEL IYO DAAWO
kkkkkkk yaab.com walahi qofkii caafimaad iyo dhakhtar u baahan holland iyo germany ha tgo
Waa xaqiiq arintaas in an wax daryel ah laku qabin
asc jimcaale anig a magaceyga waa asad abdi
ilaa hal sano waxan ka xanun sa hay calosha wax dar yel ah dolada ima qaban
asc waan idin salaamay asxaabta, salaan kadib baryahaan arinki 2da sano xaguu kudanbeeyay. mudaaharaadkina aaway la qalqaalinayay
yusuf abdi mohamed zalatan says: